Izindaba - SWITCH isilawuli
Kuyisilawuli se-SWITCH PRO esingenantambo se-NINTENDO SWITCH/SWITCH LITE, esinomsebenzi we-TURBO weleveli engu-3, ​​ukudlidliza okulungiswayo okungamaleveli angu-4, ukulawula ukunyakaza kwama-eksisi ayisithupha, ukhiye owodwa wokuvuka kanye nokhiye bemephu.
1. [Isilawuli Sokushintsha Kwedizayini Esisha]: Lesi silawuli seswishi sifanele i-Nintendo Switch kanye ne-Switch Lite.Ayinayo nje kuphela idizayini yesithombe esikhethekile, kodwa futhi inomsebenzi we-Turbo, umsebenzi wokudlidliza we-high-frequency, inzwa ye-multi-gyro, ukuvuka kokhiye owodwa, ukhiye wemephu, umsebenzi wesithombe-skrini neminye imisebenzi.Kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi iwumkhiqizo ongcono kakhulu wabantu abathanda imidlalo.
2. [Umsebenzi we-turbo oguquguqukayo]: Ngomsebenzi we-turbo, imisebenzi yokudubula ezenzakalelayo kanye ne-semi-automatic ingasethwa.Umsebenzi wokuthungela othomathikhi wesilawuli ungasethwa ngesivinini esingu-5/12/20 izikhathi ngomzuzwana.Uma uphinda inkinobho isikhathi eside, uzozizwa ukhathele.Ngokusebenzisa umsebenzi wokudubula osheshayo, ungakhululwa ekusebenzeni kwezinkinobho ezilula futhi unciphise ukukhathala kwezinkinobho eziphindaphindiwe.
3. [I-gyroscope ye-axis eyisithupha & nokudlidliza okuningi]: I-gyroscope eyakhelwe ngaphakathi ye-axis eyisithupha ukuze kwenziwe imiyalelo yokusebenza kwenzwa ye-gyroscope inembe kakhudlwana.Iphinde ibe nomsebenzi wokudlidliza onemvamisa ephezulu, futhi amandla okudlidliza angalungiswa kumaleveli angu-4 (akekho/abuthakathaka/ajwayelekile/aqinile), angalungiswa abe namandla okudlidliza afanelekile noma amandla akho okudlidliza owathandayo ngokuya ngohlobo lomdlalo. .Jabulela ukuzizwisa kwegeyimu okulethwa izilungiselelo zakho zangokwezifiso.
4. [Ibhethri enomthamo omkhulu nokusetshenziswa isikhathi eside]: Ifakwe ibhethri elingu-550mAh, ingashajwa ngokugcwele emahoreni angu-2, futhi ingasetshenziswa ngokuqhubekayo cishe amahora angu-10 kuya kwangu-15, okukuvumela ukuba ube nesikhathi sokudlala esingaphazamiseki.Futhi inomsebenzi wokukhumbuza ibhethri eliphansi ukukuphelezela.
5. [Idizayini enethezekile nosayizi] ukubamba okuklanywe ngendlela ehlelekile, induku yokudlala econcave, into engasheleli ye-matte kungena isandla kangcono, kunciphisa ukucindezelwa kweminwe futhi kuvimbela ukujuluka.Futhi ikhanya kakhulu, cishe i-160g, ukuze ungakhathali ngemva kokuyibamba isikhathi eside.